Kütahya'da Tren Kazası!..1'i Ağır2Kişi Yaralandı | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ43 KutahyaKütahyaတွင်ရထားမတော်တဆမှု! .. 1 ပြင်းထန်သော2ပုဂ္ဂိုလ်ဒဏ်ရာရသည်
10 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 43 Kutahya, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
Kütahyaရှိ 1 ကုန်တင်ကားပေါ်တွင်လူနှစ် ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရသူများအားဆေးရုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည့်အခါဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များကမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်။ လူတစ် ဦး ၏အခြေအနေသည်ဆိုးရွားကြောင်းသိရှိရသည်။
စက်ပြင်ဆရာY.ÖTavşanlı-Eskişehirကုန်တင်ရထား၊ Mehmet Akif Ersoy ရပ်ကွက်၊ Kadir Gencer မှအသုံးပြုသော 24274 နံပါတ်သည်ဖြတ်ကူးသွားသည်။
Kutahya ကျန်းမာရေးသိပ္ပံတက္ကသိုလ် (KSBU) Evliya Celebi နှင့်ကားမောင်းသူ Kadir Gencer Furkan Gönültaş'ı, Kutahya ကျန်းမာရေးသိပ္ပံတက္ကသိုလ် (KSBU) နှင့်အတူမတော်တဆမှုတွင်ဒဏ်ရာရခဲ့သော 112 အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များသည်မြင်ကွင်းတွင်မတော်တဆဖြစ်မှုကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသူများ၏သတိပေးချက်တွင်။ ဒဏ်ရာရသူ Kadir Gencer ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအကာအကွယ်ပေးသည်ဟုသိရှိရသည်။
Halıcıoğluအတွက် Metrobus မတော်တဆမှု,2ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် 19 / 04 / 2016 Halıcıoğlu'nda Metrobüs kazası,2kişi yaralandı :Halıcıoğlu’nda metrobüsün önüne fırlayan 1 kişi kazaya sebep oldu. Halıcıoğlu'nda metrobüsün önüne fırlayan 1 kişi kazaya sebep oldu. Kazada yola fırlayan şahıs ile araçta…
Antalya ဓါတ်ရထားမတော်တဆဖြစ်ပွားမှု: 1 လူတွေဒဏ်ရာရ 13 / 12 / 2012 Antalyada Tramvay Kazası: 1 kişi Yaralandı Tramvay güzergahı olması nedeniyle yaya girişinin yasak olduğu bölgeden yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı. Antalya'da tramvay güzergahı olması nedeniyle yayaların kullanımına kapatılan…
အဆိုပါ 1 အမှိုက် Truck ကားများတွင် Batman ရထားဒဏ်ရာရသူကူးထားပါတယ် 31 / 01 / 2018 1 လူများသည်ရထားတစ်စင်းသည် Batman ရှိမြေပြိုရာနေရာတွင်အမှိုက်သရိုက်ထရပ်ကားတစ်စီးတိုက်မိသည့်အခါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ Batman ရှိİkiköprüBeşiriခရိုင်ရှိရထား၊ အဆင့်မြင့်ဖြတ်ကျော်ဖြတ်သန်းနေသည့်အမှိုက်သရိုက်ထရပ်ကား…
ဟောင်ကောင်, 8 ပြည်သူ့ဒဏ်ရာရသူများတွင်မီးရထားလွဲသွား 18 / 09 / 2019 Hong Kong’da Tren Raydan Çıktı, 8 Kişi Yaralandı. Haftalardır Çin karşıtı protestolara ev sahipliği yapan Hong Kong'da tren kazası meydana geldi. Hong Kong'da yüzlerce yolcusu bulunan tren, Kowloon'da raydan çıktı.…
ရထားလက်အောက်တွင် Wagon ရထားကအကြီးအကျယ်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ရွေ့လျားမှု၏ဖြတ်သန်း 14 / 04 / 2015 Tren Vagonunun Altından Geçerken Tren Hareket Etti Ağır Yaralandı :Yozgat'ın Yerköy İlçesi'ndeki tren istasyonun karşı tarafına geçmek isteyen 36 yaşındaki Orhan Uyar altından geçmeye çalıştığı yük trenin hareket etmesi sonucu…
Antalya ဓါတ်ရထားမတော်တဆဖြစ်ပွားမှု: 1 လူတွေဒဏ်ရာရ
အဆိုပါ 1 အမှိုက် Truck ကားများတွင် Batman ရထားဒဏ်ရာရသူကူးထားပါတယ်
ရထားလက်အောက်တွင် Wagon ရထားကအကြီးအကျယ်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ရွေ့လျားမှု၏ဖြတ်သန်း
Erciyes နှင်းလျှောစီး 28 ပြည်သူ့ဒဏ်ရာရသူမှာကျဆင်းနေချိန်တွင်
အစ္စတန်ဘူလ်ဖို့လမ်းပေါ်မှောက် Metrobus မော်တော်ယာဉ်,3ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်
ကုန်တင်ရထားကလူ Konya အတွက်ဒဏ်ရာရရှိ4ကားတစ်စီးဝင်တိုက်ခဲ့သည်